Thola ukuthi yiluphi uhlobo lweMicrosoft .NET Uhlaka esinalo | Izindaba zamagajethi
Ungazi kanjani ukuthi yiluphi uhlobo lweMicrosoft .NET Uhlaka esilufakile
Umbulali Uviniga | | Aplicaciones, Software, Windows
Uhlaka lweMicrosoft .NET luyipulatifomu evame ukusetshenziswa ngonjiniyela bezinhlelo zokusebenza abathembele emisebenzini yabo ukuze iziphakamiso zabo zisebenze kangcono kuzinguqulo ezihlukile zeWindows.
Uma singenayo inguqulo yamanje noma eyiyo ku-Windows, uhlelo lokusebenza lungavele luyeke ukusebenza noma lube nokungezwani okumbalwa; singanikeza isibonelo esincane kufayela le- imishini engokoqobo, okuyi bathembele ikakhulu kuleplatifomu ye-Microsoft .NET Framework.
Kungani ukufakwa kwe-Microsoft .NET ku-Windows?
Uma usebenze isikhathi eside kunguqulo ethile ye-Windows, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi uma uvula isiphequluli se-Inthanethi ukubuyekeza amanye amavidiyo avela ku-YouTube (noma enye ingosi), kuvela umyalezo ocela ukuthi ufakwe Isidlali se-Adobe flash, kahle ngaphandle kwalokhu kuphelelisa ukukhiqizwa kwamavidiyo bekungeke kwenziwe nganoma yisiphi isikhathi; isimo esifanayo sifana Imidlalo esekwe kuJava, Ngakho-ke kudinga i-Java Runtime njengomphelelisi. Akuyona imishini ebonakalayo esebenza kuWindows kuphela edinga iMicrosoft .NET Framework, kepha, inhlobonhlobo enkulu yezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza, ngakho-ke kufanele yazi ukuthi yiluphi uhlobo esilufake njengamanje kwiWindows, esizoyithola nganoma yiziphi ezinye izindlela esizozisho ngezansi.
1. I-ASoft .NET Version Detector
Uma ufuna isisombululo esisheshayo nesisebenzayo ukuthola lolu lwazi, sincoma ukusebenzisa i- "ASoft .NET Version Detector", ithuluzi elizosazisa ngezinhlobo zohlaka lweNET esilufakile kuWindows.
Uma kungekho noyedwa wabo, leli thuluzi lizobonisa isixhumanisi esizosiqondisa kuwebhusayithi ye-Microsoft ukuze sikwazi ukuyilayisha. Ngenxa yesikhombimsebenzisi esinaso nemisebenzi elula kakhulu esivuna abasebenzisi, lokhu kungaba yindlela yokuqala kulabo abangenalo ulwazi oluningi ngalesi siza; Kufanele ucabange ngaphambilini ukuthi isixhumanisi sizokuqondisa kuwebhusayithi ye-Microsoft, kube ngumsebenzisi okufanele akhethe ukulanda kusuka ku- Inguqulo engu-32-bit noma engu-64-bit.
2. Isihloli Senguqulo ye-NET
Ngaphandle kokuthi leli thuluzi livuselelwe ukuze lisebenze kuze kufike ku-Windows 7, lisasetshenziswa namanje yazi ukuthi iyiphi inguqulo yohlaka lwe-NET Yileyo umsebenzisi ayifakile ohlelweni lwabo lokusebenza. Mhlawumbe iphutha elincane ukuthi leli thuluzi aliwutholi umtapo wezincwadi we-AOD (ActiveS Data Objects), okungenye yezingxenye zohlaka lweNET.
Ngokungeziwe kulwazi olunikezwe kusuka kusixhumi esibonakalayo saleli thuluzi, umsebenzisi futhi thola uhlobo lwenguqulo ye-Internet Explorer ozifakile kwiWindows yakho. Uma ufuna lonke lolu lwazi lutakulwe efayeleni, ungasebenzisa umsebenzi walo ukulukopisha ebhodini lokunameka, elizosetshenziswa kamuva ukulithumela ngokusebenzisa idokhumenti nge-imeyili kunoma ngubani oludingayo.
3. Ukulawulwa mathupha kohlaka lwe-NET
Yize kuliqiniso ukuthi ezinye izindlela ezibalulwe ngenhla zisingathwa kalula ngoba umsebenzisi kufanele enze nje izinkinobho ezimbalwa ezinkinobheni zesixhumi esibonakalayo, kunenye futhi indlela engabhekwa njenge "manual". Lokhu kungenxa yokuthi ngaphandle kokufaka noma ukusebenzisa uhlelo oluphathekayo, singabuyekeza idatha ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza ezifakwe kuWindows.
Ngalokhu kuzodingeka ukuthi siye kuphela:
Khetha inketho "Izinhlelo nezici"
Khetha inketho yokuthi "Vumela noma Khubaza Izici zeWindows."
Ngemuva kokwenza lo msebenzi, uzobona ukuthi ohlangothini lwesokunene kuzokhonjiswa imiphumela embalwa, kufaka phakathi leyo ekhombisa thina inguqulo yeNET Framework esinayo njengamanje; Kunezinye izindlela eziningi zemanuwali ezingasetshenziswa ukuthola imininingwane eshiwo, yize umsebenzisi we-novice engadingi ukwazi lezi zindlela, ngenkathi umsebenzisi onguchwepheshe kwezamakhompiyutha, nakanjani azokwazi kahle indawo lapho kufanele bangene khona isistimu yokusebenza yokubhalisa ukuthola lolu lwazi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungazi kanjani ukuthi yiluphi uhlobo lweMicrosoft .NET Uhlaka esilufakile
Ungawukhipha kanjani umsindo kuvidiyo bese uyiguqulela kokuhlukile
Ungayithola kanjani kabusha i-MBR eyonakele engavumeli iWindows iqale